Umthandazo wegazi likaKristu. ? Kubantwana kunye nokukhuselwa
Umthandazo wegazi likaKristu. Kuzo zonke izinto esinazo kwiCawa yamaKatolika, igazi likaKristu lelona linamandla kwaye yiyo loo nto likho umthandazo kwigazi likaKristu.
Yinto esekho nanamhla oku kuba isesezandleni zikaYesu Kristu ovukileyo. Ukholo lwethu ligcina umfanekiso kaYesu ephila emnqamlezweni apho igazi lakhe liqukuqela ngenxa yothando lwabantu.
Nasiphi na isicelo esinaso, siyakholelwa ukuba igazi elinamandla likaKristu linamandla ngokwaneleyo okusinika oko sikucelayo.
Umthandazo unokwenziwa naphi na kwaye yonke into efunekayo kukuba ube nokholo lokuba ummangaliso usinikiwe.
1 Ngaba umthandazo wegazi likaKristu unamandla?
1.1 Umthandazo wegazi likaKristu wabantwana
1.2 Umthandazo wegazi likaKristu ngamatyala anzima
1.3 Umthandazo kwigazi likaKristu ukuze ugxothe iingxaki
1.4 Yokhuseleko ngegazi likaKristu
1.5 Umthandazo wemihla ngemihla
Ngaba umthandazo wegazi likaKristu unamandla?
Yonke imithandazo kuThixo inamandla.
Ukuba uthandaza ngokholo uya kuba nayo yonke into oyikhangela.
Yiba nokholo kwaye ukholwe kumandla eNkosi yethu uYesu Krestu.
Umthandazo wegazi likaKristu wabantwana
Owu Bawo, ndiza ukukucela ndicela uve izwi lam, ndikhathazekile, ndingenelele ukuze unyana wam amke kwinkampani embi angangeni ekusetyenzisweni kweziyobisi, notywala, ajoyine kwakhona Isikolo, ndicela ngentliziyo yam yonke ukuba ubenamandla egazi likaYesu Krestu, Nkosi, umenze umntu olungileyo kwakhona.
Nkosi, Bawo osezulwini, hlambulula umphefumlo wonyana wethu, umhlambulule ngobubi, intiyo, ingqumbo, uloyiko, usizi, isizungu, usizi nentlungu ... ngegazi lakho, siyamcela ukuba umguqule abe ngumntu othanda abanye , echwayitile, ezolile, onobubele, ngaphandle koloyiko, odlulisa uthando, ngaphandle kwentlungu, Wumba umoya ukukhusela ngegazi lakho elixabisekileyo.
Thixo onenceba, wena owazi yonke into, obona yonk 'into, usinike ubulumko kuba singabazali kwaye sifuna ukuba ngcono, ndincede ndibaqonde nabo, siyayazi ukuba mdala kangakanani kwaye kulapho xa bengaphumeleli kwaye / okanye bemvukelo.
Ewe, igazi elisikelelekileyo likaYesu Krestu laphalala uYesu, kunyana wethu, igazi lakho elisikelelekileyo nelicocekileyo, ukuze libe namandla.
Ndikubuza ndingena nzulu kobubomi bam.
Unokuthandazela umthandazo weGazi likaKristu ngenxa yabantwana abanomntwana wakho.
Abantwana banezinto ezintle kakhulu ezinokwenzeka kuthi. Ngaba iziqhamo zothando lwethu kwaye sibamkela kweli lizwe ligcwele luvuyo nokholo lokuba yonke into iza kubasebenzela ebomini.
Kodwa akhona amaxesha apho thina, njengabazali, siphila amava angathandekiyo kwaye kulapho iGazi linakho Kristu Iba kuphela kwethemba lethu.
Ukucela abantwana bethu sisenzo esibonisa uthando esinokusenza.
Umthandazo wegazi likaKristu ngamatyala anzima
OGazi elisikelelekileyo likaYesu Krestu! Hlambuluka, igazi lomntu kunye nelikaThixo, ndihlambe, ndicoce, ndikuxolele, ndizalise ngobukho bakho; Ukucoca igazi elinika amandla, ndiyakuncoma ebusweni bakho boMthendeleko esibingelelweni, ndiyakholelwa kumandla akho nobumnandi bakho, ndiyathemba ukuba uyakundilindisa kuzo zonke izinto ezimbi kwaye ndiyakucela ndingene nzulu kubomi bam: ungene umphefumlo wam kunye Yicoceke, uyigcwalise intliziyo yam kwaye uyenze ibe ntetho.
Igazi elixabisekileyo elaphalazwa emnqamlezweni kunye nokubetha kwentliziyo eNgcwele kaYesu, ndiyakukhonza kwaye ndikunika indumiso nothando lwam, kwaye ndiyabulela kuwe kwiGazi lakho nangobomi bakho kuba ndiyabulela kula madoda sisindisiwe kwaye sifumana ukhuselo ngaphambili Yonke into embi ejikeleze thina.
Owu Yesu, ondinike isipho esixabisekileyo seGazi lakho, kunye neKalvari, ngenkalipho nangokuzinikela, undicolisile kuwo onke amabala kwaye wagalela ixabiso lentlawulelo yam; Owu Yesu Krestu, osibingelela ebomini bam ebomini, unxibelelana nobomi kum, ungumthombo wayo yonke imigca eyaziwayo, kunye nesipho esikhulu sikaThixo kubantwana bakhe, uluvavanyo nesithembiso soNothando olungunaPhakade kuthi.
Ndiyabulela onke amathuba endisindiswe kuwo nokukhusela ngamandla akho, endixhasa ekuqinisekeni kokuqonda ngokupheleleyo ubuthathaka bam, ukuba sesichengeni kwam kunye nokukwazi kwakho ukundikhusela ebubini obujikeleze kum, imilingo yesidemon ehlala isambatha ngaphaya kwamandla ethu kunye nokwenzeka.
Enkosi ngokuba ligazi lasebukhosini elikhulula ubomi bethu ebumnyameni nakwizixhobo zobubi ezihlala zisenzakalisa.
Igazi likaKristu lahluma ngeloxesha wanikela ngobomi bakhe ngenxa yothando lwabantu kwaye kulo amandla kaThixo wagxila ukusinika imimangaliso esiyifunayo.
Zingaba zizicelo ezinzima. Imimangaliso eyinyani apho amandla angaphaya kwawemvelo anokusebenza khona kwaye anokuba namandla eGazi likaKristu.
Lo mthandazo ungenziwa nosapho okanye umhlobo, into ebalulekileyo yeyokuba kufuneka sikholelwe, yiyo loo nto iqinisekisa ukuba umthandazo uyasebenza.
Umthandazo kwigazi likaKristu ukuze ugxothe iingxaki
Iingxaki, kwiimeko ezininzi, faka ngaphakathi kuthi kwaye zikwenzakalise. Sichitha ubusuku bokungalali sicinga ngemeko enengxaki esinayo kwaye oku kusizisela iziphumo zomzimba ezicaphukisayo.
Ukwazi ukugxotha iingxaki ngaphandle kwethu, kumakhaya ethu nangaphandle kwezalamane zethu ezisondeleyo sisenzo esifanelekileyo kwaye kula mandla egazi likaKristu anokusinceda.
Thandaza ngesi sicelo kwaye ukholelwe ukuba impendulo yeNkosi isendleleni.
Yokhuseleko ngegazi likaKristu
Nkosi Yesu, eGameni lakho, nangamandla eGazi lakho elixabisekileyo sitywina wonke umntu, iinyani okanye izehlo apho utshaba lufuna ukusenzakalisa khona.
Ngamandla eGazi likaYesu siwatywina onke amandla atshabalalisayo emoyeni, emhlabeni, emanzini, emlilweni, phantsi komhlaba, kwimikhosi kaSathana yendalo, kwinzulu yesihogo, nakwi el mundo apho siza kuhamba khona namhlanje.
Ngamandla eGazi likaYesu siluqhawula lonke uphazamiso kunye nesenzo salowo ungendawo.
Sicela uYesu ukuba athumele iNkosazana enguMsikeleleyo emakhayeni ethu nakwiindawo zomsebenzi abahamba no-Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael nayo yonke inkundla yakhe yase Santos Angeles.
Ngamandla eGazi likaYesu siyitywina indlu yethu, bonke abahlala kuyo (chaza ngamnye kubo), abantu iNkosi eya kubathumela kuyo, kunye nokutya, kunye nezinto asithumela zona ngesisa inkxaso.
Ngamandla eGazi likaYesu sitywina umhlaba, iingcango, iifestile, izinto, udonga kunye imigangatho, umoya esiwuphefumlayo kwaye ngokholo sibeka isangqa seGazi lakhe ngeenxa zonke kusapho lwethu.
Ngamandla eGazi likaYesu sitywina iindawo esiza kuba kuzo ngolu suku, nabantu, iinkampani okanye amaziko esiza kujongana nawo (igama ngalinye lazo).
Ngamandla eGazi likaYesu sitywina izinto zethu kunye nezinto zokomoya, amashishini osapho lwethu lonke, kunye neemoto, iindlela, umoya, iindlela kunye naziphi na iindlela zothutho esiya kuzisebenzisa.
NgeGazi lakho elixabisekileyo sitywina izinto, iingqondo kunye neentliziyo zabo bonke abahlali kunye neenkokheli zelizwe lethu ukuze uxolo lwakho kunye nentliziyo yakho zilawule kulo.
Sibulela iNkosi ngeGazi lakho nangobomi baKho, kuba siyabulela kubo kuba sisindisiwe kwaye sikhuselekile kubo bonke ububi.
Lo mthandazo wokhuselo ngegazi likaKristu unamandla kakhulu!
Singacela ukuba igazi lika Krestu elinamandla lisigubungele njengengubo yokhuseleko ejikeleze thina ukuze ongendawo angachukumi kuthi. Asazi thina okanye iintsana zethu okanye nabani na wosapho kunye nabahlobo.
Njengoko kwenzeka kwi Isivumelwano esitsha elatshiza igazi kwizibonda zezindlu njengomqondiso wokhuselo, ngokufanayo nokholo esikwenza namhlanje sikucela oko igazi likaKristu linobungeno bamakhaya ethu malunga nathi kwaye sikhusele kubo bonke ububi.
Thixo wam khawundincede, Nkosi, khawuleza undincede.
Ndicela ukhuselo olunamandla lwegazi eliKhulu lokuKhulula likaKristu, uKumkani weNdalo iphela kunye noKumkani wookumkani.
Egameni loThixo uYise, egameni loThixo uNyana, negama likaThixo uMoya oyiNgcwele: ngeGazi likaYesu Krestu iNkosi, ndiyatywina ndikhusele, ndikhusela kwaye nditywina, ukwazi kwam, ukungazi, ukungazi, isizathu sam, Intliziyo yam, iimvakalelo zam, ukuqonda kwam, ubuntu bam ngokwasemzimbeni, imeko yam yengqondo, ukubonwa kwam ngokwasemzimbeni kunye nokuba yeyam ngokomoya.
Yonke into endiyiyo, yonke into endinayo, yonke into endinayo, yonke into endiyaziyo nayo yonke into endiyithandayo, itywiniwe kwaye ikhuselwe ngamandla eGazi likaYesu Krestu iNkosi. Thixo wam khawundincede, Nkosi, khawuleza undincede.
Nditywina okwakudala, okwangoku kunye nekamva lam, nditywina izicwangciso zam, iinjongo zam, amaphupha, ubuqhetseba, yonke into endiyenzayo, yonke into endiyenzayo, yonke into endiycingayo noyenzayo, itywinwe kakuhle kwaye ikhuselwe ngamandla eGazi likaYesu Krestu. INkosi Thixo wam khawundincede, Nkosi, khawuleza undincede.
Nditywina umntu wam, usapho lwam, izinto zam, indlu yam umsebenzi wam, ishishini lam, umthi wosapho lwam, owokuqala nangasemva kwayo, yonke into itywinwe kwaye ikhuselwe, ngaMandla eGazi likaYesu Krestu iNkosi.
Ndizifihla emnxebeni wecala likaYesu owenzakeleyo, ndizifihle entliziyweni eNgcwele yeNtombi Enyulu uMariya, ukuze kungabikho nto kwaye kungabikho mntu unokundichaphazela ngobubi babo, ngamazwi abo amabi nangezenzo zabo, ngeminqweno yabo emibi okanye ngenkohliso yabo, ukuze kungabikho mntu undenzakalisayo kubomi bam bobuzwilakhe, kuqoqosho lwam, kwimpilo yam, ngempilo yabo ethunyelwayo, kunye nezikhwele zabo, ngamehlo amabi, ukuhleba nokuhleba, okanye ubugqi, ubugqi, iziphonso okanye ihexes.
Ubume bam bonke butywiniwe, yonke into ejikelezileyo itywiniwe, kwaye ndi ……. Ndikhuselwe ngonaphakade ngeGazi eliXabisekileyo loMhlawuleli wethu.
Thandaza ku umthandazo iGazi likaKristu lemihla ngemihla ngokholo olukhulu.
Esi siko esisinceda ukuba ukholo luhlale luhleli kusapho kunye nokukhuthaza umanyano lwenyama nangokomoya lungu ngalinye.
Kungenziwa kusasa ukuba ubonise usuku olutsha phambi kobukho boThixo onamandla onke. Unokwenza iintsuku ezisithoba ngokulandelelana okanye wenze umthandazo ozenzekelayo. Into ebalulekileyo kukuba ungayeki ukuyenza.
Kukho amabakala apho ukholo lubonakala kulula kakhulu ukuluqhekeza kwaye kulawo maxesha apho imithandazo yemihla ngemihla iqala ukuthwala isiqhamo. Ukubuza ukuba ngegazi likaKristu, usuku lwethu malusikelele lubalulekile kwaye lunamandla.
Ngalo lonke ixesha ukholelwa ukuba iGazi likaKristu lomthandazo linamandla.